Ampanjifaina ny Android - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
Ny fampiharana rindrambaiko tsara indrindra ho an'ny Android
Mampiseho aminao izahay hoe iza no rindrambaiko tsara indrindra hita ao amin'ny Play Store handanjalanjana ny rindrina amin'ny Android.
Ny zava-drehetra hanaingoana ny Android maimaim-poana !!
Fisafidianana rindranasa hanamboarana Android maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana isaky ny se fampiharana ary fandoavam-bola izay lasa maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Ahoana ny fametrahana alarm amin'ny hira Spotify tianao amin'ny finday Android rehetra
Manana an'io fiasa manokana an'ny Galaxy S20 io amin'ny finday Android sy amin'ny fomba tena tsotra koa izahay. Manampy anao amin'ny fandefasana azy izahay.
Fomba 2 hamoronana ny Emojis anao manokana amin'ny Google Gboard
Miverina izahay miaraka amina fampianarana video Android azo ampiharina, izay hanehoako anao fomba roa samihafa hamoronana ny Emojis ho an'i Gboard.
Nova Launcher Prime misy amin'ny 0,59 euro mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana tsara indrindra hanamboarana ny smartphone Android, Nova Launcher Prime, dia amidy amin'ny vidiny 0,59 euro fotsiny.
Ahoana ny fomba hamoronana lohahevitra manokana anao amin'ny findainao Galaxy amin'ny ThemePark an'i Samsung
Samsung dia nandefa ity fampiharana vaovao ity izay mamela anao hamorona lohahevitra manokana miaraka amin'ny dingana fohy telo tokony horaisina. Ataovy miavaka ny findainao Galaxy izay tianao.
Ny fandrindrana tsara indrindra ho an'ny Nova Launcher. (Hevitra manokana)
Ity no iray ho ahy izay fanaingoana tsara indrindra ho an'ny Nova Launcher. Averiko ihany fa hevitra manokana miankina amin'ny zavatra niainako manokana !!
Tetikasa 4K maimaim-poana iray tapitrisa !!
Lahatsary-video izay anolorako rindrambaiko hampidina ny Wallpaper 4K maimaim-poana amin'ny terminal Android-nao.
Azonao atao izao ny misintona ny sary «mivantana» an'ny Pixel 4 amin'ny findainao Android
Ny Pixel 4 dia haseho afaka andro vitsivitsy ary manana safidy hampiasa ny sary miaina velona izy noho ny mpamorona XDA.
Ny fikirana rehetra tokony hamboarinao amin'ny dingana voalohany amin'ny Galaxy Note10 + (sy ny Galaxy hafa)
Asehonay anao ny toe-javatra rehetra mila ampiendrehana anao ny Samsung Galaxy Note 10+ hamela azy ho vonona hampiasaina isan'andro.
Ahoana ny fananana mari-pamantarana peratra na marindrano amin'ny Galaxy S sy naoty tao anatin'ny 3 taona lasa
Rindrambaiko roa hananana mari-pamantarana bateria peratra amin'ny Galaxy S8, S9, S10, S10e, S10 +, Note 9, Note10, Note 10 5G ary Note 10+.
Ampidino ireo sary maimaimpoana maimaimpoana ireo ho vonona amin'ny fahatongavan'ny Android 10 rahampitso
Ireo wallpaper ireo dia mety indrindra aminao hiomanana rahampitso rehefa hanomboka ny Android 10 hanova lehibe.
Ataovy miavaka ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny lohahevitra ilainao amin'ny UI iray miaraka amin'ny Hex Installer
Hex Installer dia fampiharana vaovao ahafahanao manamboatra ny lohahevitry ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray amin'ny fomba tokana izay mampiavaka azy.
Ahoana ny fanovana ny fisehoan'ny Box Box anao
Mampiseho aminao fomba tsotra sy tsotra iray izahay hanovana ny fisehoan'ny TV Box anao hanomezana azy maoderina sy asa bebe kokoa.
Misintona Live Wallpapers ho an'ny lalao video Retro maimaimpoana
Atoroko anao ny fomba hisintomana ireo Live Wallpaper maimaimpoana amin'ny lalao video Retro toa an'i Mario Bros, Sonic, Mortal Kombat sy ny maro hafa.
Fampandrenesana momba ny hidin-trano mahavariana. Tena mandaitra !!
Araraoty tsara ny Android anao amin'ity rindranasa mahavariana ity hitantanana ny fampandrenesantsika eo amin'ny efijery hidin-trano.
Ahoana ny fampidinana sary mivantana mivantana an'ny dihy Fortnite. (Ary ampiharo amin'ny Android-nao izy ireo)
Horonantsary izay anehoako anao ny fomba fampidinana ireo Live Wallpapers maimaim-poana amin'ny dihy Fortnite sy ny fomba fampiharana azy ireo amin'ny terminal Android anao.
Ahoana ny fanovana ny endritsoratra amin'ny finday avo lenta Huawei
Fantaro ny fomba fanovana ny endritsoratra amin'ny finday avo lenta Huawei sy Honor amin'ny fampiasana Theme Editor for EMUI amin'ny telefaona.
Fampiharana 3 hisintomana ireo sary mivoaka maimaim-poana
Horonantsary izay anolorako hevitra sy hizarako fampiharana 3 hisintomana ny Wallpaper tsy misy kalitao avo lenta. Malalaka tanteraka izy rehetra.
Ahoana ny fanovana ny rafitra fampandrenesana Android amin'ny alàlan'ny fanarahana azy araka izay tianao. Mahavariana !!
Fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hanovantsika ara-bakiteny ny rafitra fampandrenesana Android amin'ny alàlan'ny fanarahana azy araka izay itiavantsika azy.
Ahoana ny fomba hanafenana ny lavaka ao amin'ny efijery an'ny Galaxy S10 amin'ny fomba feno faharanitan-tsaina
Ny Galaxy S10 sy ny haingon-tsariny dia fironana satria izy ireo no fomba faran'izay mahay manafina ny lavaka eo amin'ny efijery.
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny Live Walpapers ho an'ny Android
Sintomy ny Live Wallpapers maimaimpoana amin'ity fampiharana ity ho an'ny Android izay atolotray. Raha tianao ny fanaingoana Android dia tsy hadinoinao izany !!
Samsung dia manomboka mamoaka sary am-baravarankely ho an'ny lavaka lamba amin'ny S10 mba horaisina tsara
Raha manana Galaxy S10 ianao ary te hanafina ny lavaka eo amin'ny efijery voalohany, ireo sary 4 avy any Samsung ireo no tsara indrindra.
Sintomy ny Black Launcher, mpandefa maivana maimaimpoana mandritra ny 24 ora fotsiny
Sintomy ny Black Launcher maimaim-poana, ilay mpandefa mora indrindra, tsotra ary tsotra indrindra miasa ao amin'ny Google Play Store izao maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
Ny sary an-tsokosoko rehetra an'ny Galaxy S10 sy S10 +
Niara-natambatra ireo sary mahafinaritra rehetra ho an'ny Galaxy S10 izay mifantoka amin'ny lavaka eo amin'ny efijery izay mamela famoronana lehibe.
Ovao amin'ny One UI Tuner ny bara misy ny toe-javatra, ny fikirana haingana ary bebe kokoa amin'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny Android Pie
Amin'ny One UI Tuner dia azonao atao ny manamboatra ny Samsung Galaxy nohavaozina amin'ny Android Pie. Fampiharana iray izay avy amin'ny XDA.
Ahoana ny fananana ny iOS12 Control Center amin'ny Android rehetra.
Lahatsary izay anolorako tena ho ahy dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanamboarana ny Centrod sy Control an'ny iOS12 amin'ny Android.
Fikirana haingana Android ho an'ny iOS Control Center
Lahatsary ampianariko azy ireo hanana ny Fikirakirana Quick of Adroid mankany amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso an'ny iOS, izany hoe eo amin'ny farany ambany amin'ny Android misy antsika.
[APK] Ahoana ny fanahafana ny fisokafan'ny sidina Oneplus 6T amin'ny Android rehetra
Ampianariko ianao hanahaka ny fanidiana ny rantsan-tànana amin'ny efijery Oneplus 6T. Rindrambaiko miompana amin'ny personalization fa tsy mankany amin'ny filaminana mihitsy.
Gboard dia manampy lohahevitra vaovao 54 miaraka amin'ny effets gradient
Fantaro misimisy kokoa momba ireo lohahevitra vaovao momba ny gradient 54 izay nipoitra tao amin'ny Gboard, ilay app keyboard ho an'ny Android.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny endrik'i Gboard amin'ny telefaona Android anao
Jereo ny fomba roa ahafahantsika manamboatra ny lohahevitry ny kitendry Gboard antsika amin'ny Android hifanaraka amin'ny zavatra tiantsika.
Ahoana ny fanovana ny filaharan'ny kisary fitetezana amin'ny Android
Ny fanovana ny filaharan'ny sary masina aseho eo amin'ny bara fizahana dia dingana tsotra izay hasehonay anao eto ambany.
Ny tetika tsara indrindra hanamboarana Gmail amin'ny Android
Jereo ity safidin-tsoloky ity hanamboarana ny fampiasana Gmail amin'ny telefaona Android amin'ny fomba tsotra ary hialana bebe kokoa amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hamoronana ny Emoji Mini anao miaraka amin'ny endrika vaovao ao amin'ny Gboard
Ahoana ny fomba famoronana emojis azo adino amin'ny Gboard. Jereo ny fiasa vaovao an'ny rindrambaiko fitendry ary mamorona emojis anao manokana.
Inona no dikan'ireo sary masina WhatsApp ho an'ny hafatra
Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy Jereo hoe inona no dikan'ireo sary masina rehefa mandefa hafatra amin'ny fampiharana.
Ny rindranasa tsara indrindra hampiavaka ny Android amin'ny Halloween
Safidy malalaka amin'ny fampiharana, lohahevitra, mpandefa ary ny zavatra rehetra ilainao hamitanao ny telefaona Android amin'ity Halloween 2018 ity.
Ny rindranasa dimy tsara indrindra hampiavaka an'i Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo hanamboarana endrika amin'ny telefaona.
Ahoana ny fomba fampidinana lohahevitra ho an'ny MIUI, ao anatin'izany ny MIUI 10
Ny Galaxy S8 dia mahazo ny Emoji sy ny asan'ny Slow-Motion an'ny Galaxy S9 amin'ny fanavaozana farany
Ny fanavaozana ny fiarovana vaovao an'ny Samsung Galaxy S8, dia manome antsika zava-baovao roa manan-danja, izay avy amin'ny tanan'ny Galaxy S9
[APK] Ahoana ny fametrahana Xiaomi Mi Emoji
Raha malahelo ny emoji Android ianao dia efa azonao atao ao amin'ny Android Gboard sy Messages izany
Ny hafatra Gboard sy Android dia ahafahantsika manana ny emoji Android fantatra amin'ny blobs indray. Nanjavona izy ireo hatramin'ny nanalanana an'i Allo.
Fomba 2 hanovana sary masina amin'ny Android
Samsung dia mamela ny fanaingoana ny feon'ny hafatra indray
Ny fanavaozana farany izay omen'ny Samsung ho an'ny mpampiasa rehetra misy fantsona misy Android Oreo dia ny fahaizana manamboatra ny feon'ireo hafatra.
Memoji no valin'ny Apple an'ny AR Emoji an'ny Samsung
Ny orinasan-tserasera Cupertino dia nanolotra endrika vaovao antsoina hoe Memoji, mazava tsara fa aingam-panahy avy amin'ny rafitra emoticon azo ovaina miaraka amin'ny tarehinay avy amin'ny AR Emojis an'ny Galaxy S9.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny bokotra Android amin'ny efijery tsy mila ROOT. [Android 7.0+]
Torohevitra momba ny horonantsary izay anehoako anao fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android izay hahafahantsika manamboatra ny bokotra Android eo amin'ny efijery nefa tsy manana terminal miorim-paka.
Ahoana ny fametrahana an'i Donald Duck Augmented Reality Emoji amin'ny Galaxy S9
Azontsika atao izao ny mankafy ny AR Emoji an'i Donald Duck ao amin'ny Galaxy S9 sy Galaxy S9 +. Raha tsy hainao ny mametraka azy, ato amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny fomba fanaovana azy.
Deutsche-Telekom hampitsahatra ny fanaingoana ireo smartphone
Deutsche-Telekom dia hampitsahatra ny fanaingoana ireo smartphone. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapaha-kevitr'ilay mpandraharaha alemanina izay manamarika ny faran'ny bloatware ho an'ny mpampiasa.
Avy amin'ny MWC18 izahay dia mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny Art Emojis vaovao an'ny Samsung Galaxy S9 sy S9 Plus
Lahatsary voarakitra ao amin'ny MWC18 izay anehoako anao ny fomba fiasan'ny Art emojis vaovao an'ny Samsung Galaxy S9 sy Samsung Galaxy S9 Plus
Sintomy sy apetraho ireo lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1 (SKINS)
Tutorial video azo ampiharina izay anazavako ny fomba fampidinana sy fametrahana lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1, ilay terminal izay manome antsika ny fiheveran'ny mpampiasa Android.
Ireo lohahevitra Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo lohahevitra Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ny lohahevitra Krismasy ity azo alaina ao amin'ny fitaovana Android.
Ny emoji an'ny iPhone X, «Animojis» koa ho an'ny Android izao
Azontsika atao izao ny mamorona ny iPhone X emojis amin'ny Android rehetra. Ny antsoina hoe Animojis an'ny iPhone X dia maimaim-poana amin'ny Android.
SwiftKey dia nohavaozina miaraka amin'ny lohahevitra vaovao, fiteny, emojis ary vaovao maro hafa
Ny rindrambaiko fitendry malaza ho an'ny Android sy iOS SwiftKey dia mahazo fanavaozana vaovao mampiditra lohahevitra vaovao, fiteny vaovao ary maro hafa
Tutorial izay asehoko anao ny fomba fampidinana lohahevitra maimaim-poana ho an'ny LG G6, LG G5, LG V20, sintomy izy ireo ary ampianaro azy ireo hampihatra tsara.
Action Launcher dia manampy fanohanana ireo sary mihetsika avy amin'ny Lollipop mandroso
Ny launcher application Action Launcher dia nohavaozina ary mamela ny sary masina adaptatera an'ny Android Oreo amin'ny terminal rehetra avy amin'ny Android Lollipop
Sintomy ireo fonosana kisary premium ho an'ny Android MAIMAIMPOANA, mandritra ny fotoana voafetra
Tonga tamin'ny faran'ity herinandro ity izahay tamin'ny tolotra tsara: lisitry ny fonosana kisary mba hahafahanao manamboatra ny Android maimaim-poana tanteraka
Contour, mpanonta 3D hampiasainao manokana ny smartphone
Slickwraps dia manolotra Contour, mpanonta 3D izay manonta "vinina" vinina amin'ny finday avo lenta mba hanomezany loko manokana azy
Nova Launcher dia manampy trabatra vaovao hahafahanao mandanjalanja bebe kokoa ny fitaovanao
Nova Launcher dia miara-miasa amin'ny sisin-dàlana Sesame ary Hanitatra Android 7.1 Nougat hitsin-dàlana mankany Android 5.0
Kitapo kisary maimaim-poana 3 izay naloa. Mihazakazaha misintona azy ireo, tapitra ny tolotra !!
Amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra fonosana kisary 3 maimaimpoana ho anao aho izay efa naloany ary amidy ao amin'ny Play Store mandritra ny fotoana voafetra.
Ahoana ny fanovana ny sary masina an'ny Launcher anao raha tsy mila Root, (manan-kery ho an'ny Samsung Touchwiz)
Ampianariko ianao hampiasa ilay rindranasa maimaimpoana hahafahantsika manova ny sarin'ny Launcher anay tsy mila Root, anisan'izany i Touchwiz.
Amin'ny Android O dia hanana ny endri-tsoratra emoji vaovao foana ianao
Android O dia hanohana ny famakiam-boky emoji mamela ny mpandrindra tsirairay hanampy azy ireo amin'ny fampiharana misy azy ireo
Ahoana ny fomba hanaovana sary masina namboarina ho an'ny terminal Android anao
Ato amin'ity lesona vaovao ity dia asehoko anao ny fomba fanaovana sary masina namboarina ho an'ny terminal Android amin'ny fomba tena tsotra.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny Nick anao
Amin'ity torolàlana tsotra azo ampiharina ity dia asehoko anao ny fomba maro ahafahanao manokana ny anaranao mba hiseho amin'ny endrika manintona kokoa eo amin'ny tambajotra sosialinao.
Ahoana ny fanamboarana fampandrenesana fampiharana amin'ny Galaxy S8
Miaraka amin'ny Galaxy S8 sy S8 Plus, Samsung dia mamela ny mpampiasa hanamboatra ny toetran'ny fampandrenesana manokana momba ny fampiharana
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fampisehoana foana amin'ny Samsung Galaxy S8
Araraoty tanteraka ny asan'ny On On Display an'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus vaovao ary ampanjifa ny safidinao rehetra
Ahoana ny fomba hanamboarana ny mombamomba anao amin'ny Galaxy S8
Ny Galaxy S8 sy S8 Plus an'ny Samsung vaovao dia misy safidy an-taonina hanamboarana ny mombamomba anao amin'ny feon-kira tadiavinao
Ny lohahevitra tsara indrindra ho an'ny Telegram, (hoditra), dia maimaim-poana ary tsy mila mametraka zavatra hafahafa ianao
Eto aho mitondra anao ny lohahevitra tsara indrindra ho an'ny Telegram, hoditra lehibe sy isan-karazany izay azontsika atao maimaim-poana ary tsy misintona zavatra hafahafa.
Fomba fanovana haingana, ny fampiharana hanampiana Toogles vaovao amin'ny ridao fampandrenesana Android
Custom Quick Settings dia fampiharana iray ahafahantsika mamorona toogles vaovao ao amin'ny lamba fampandrenesana ny Android, manan-kery ho an'ny Android 5.0 sy +
Gboard for Android manampy fanohanana ny Google Translate, soso-kevitra emoji, sy maro hafa
Ny fanavaozana GBoard vaovao ho an'ny Android dia mampiditra ny fanohanana ny Google Translate, lohahevitra feno fangorahana, sosokevitra emoji ary fampiasana vaovao amin'ny feo
Araraoty !! Ireo pack icon rehetra ireo dia maimaimpoana ho an'ny Android izao
Manohy ny tolotra sy ny fampiroboroboana ianao izao miaraka amin'ity lisitr'ireo rindranasa maimaim-poana izay fonosana ikona ity hahafahanao manamboatra ny Android-nao
Telegram ao amin'ny 3.17 dia mitondra fanohanana amin'ny lohahevitra manokana
Farany dia efa manana amin'ny Android manokana isika, ary aorian'ny kinova desktop, inona ireo lohahevitra manokana.
[APK] WhatsApp dia manampy emoji vaovao be dia be avy amin'ny Android 7.1
Na inona na inona kinovan'ny Android anananao, avy amin'ny kinova beta an'ny WhatsApp dia azonao atao izao ny miditra amin'ireo emojiis vaovao rehetra.
Ny fanavaozana ny Keyboard Swype vaovao dia mitondra faminaniana an'i Emoji ary maro hafa
Swype Keyboard no mpialoha lalana ny fanoratana fihetsika amin'ny finday ary ankehitriny nohavaozina tamina zava-baovao tena mahaliana.
Ahoana ny fanamboarana ny Android Taskbar raha tsy misy faka
Anio dia asehoko anao ny vahaolana hahafahanao manamboatra ny bara fiasa Android tsy misy Root na manaraka tutorial mirehitra sarotra
Omeo ny satan'ny toeranao ny loko sy ny sarin'ny endrika Android Material Pure
Ny Status dia fampiharana izay manome anao ny bara misy ny Android madio miaraka amina sary masina, fampandrenesana ary loko mitovy amin'ilay fampiharana ampiasanao
Kitapo maoderina maoderina, maimaimpoana ary tsy manam-paharoa izay tsy azonao adino
Fonosana kisarisary tsy manam-paharoa sy maoderina 5 tsy azonao adinoina hanome ny birao finday finday fanovana lehibe maimaim-poana.
Emojis vaovao sy taloha am-polony maro izao no manana fitoviana miralenta
Noho ny maha-zava-dehibe ny fampiharana fandefasan-kafatra an-tserasera, ny Unicode dia ahafahantsika miditra amin'ny karazana emotikona isan-karazany.
Ny emoji vaovao 72 izay Unicode 9.0 dia ho entina amin'ny Android amin'ity fahavaratra ity
Unicode 9.0 dia mampiditra emoji vaovao 72 izay ahitantsika paella, facepalm, kiwi, gorila ary maro hafa izay ho hitantsika amin'ny Android N
Chrooma Keyboard Final Version 3.0 Tonga miaraka amin'ny Gestures, Themes, Google Now Integration ary maro hafa
Chrooma Keyboard 3.0 dia mitondra fiasa vaovao marobe isan-karazany izay mahatonga antsika hiatrika fampiharana keyboard manana kalitao tsara kokoa.
Dango, rindranasa hananana emotikon sy GIF ao anaty hafatra sy rindrambaiko fitendry anao
Dango dia rindranasa tonga lafatra amin'ny maha "Add-on" ho an'ny rindranasan-tsofinao sy ny fandefasan-kafatra handefasana GIF sy emojis animated
Facebook Messenger dia mahazo emoji vaovao marobe miaraka amin'ny fahasamihafana bebe kokoa amin'ny firazanana sy ny miralenta
Anisan'ireo emojiis rehetra izay ampiasan'ny Facebook Messenger ny fahasamihafana bebe kokoa amin'ny firazanana sy ny miralenta. Raha fintinina dia mihoatra ny 1.500 XNUMX ny emotikon
SwiftKey dia mandefa Swiftmoji, ny fitendry izay manasongadina ny emojis
Swiftmoji dia klavie izay manana predilection manokana ho an'ny emojis amin'ny alàlan'ny fametrahana bara eo ambonin'ny soso-kevitry ny lahatsoratra.
Google Camera dia nohavaozina ho 3.2 miaraka amina sary masina vaovao sy sary amin'ny fomba video
Ny fanavaozana ny fakan-tsary Google Camera dia tsy misy afa-tsy amin'ny fitaovana Nexus misy fampiasa somary nasiam-panovana ary nalaina tamin'ny fomba video
Google dia manambara sary masina vaovao ho an'ny fampiharana Google Play
Google dia nanavao ny famolavolana ny sary masina tsirairay mandrafitra ny fampiharana Google Play toy ny boky, sarimihetsika na mozika, ankoatry ny hafa.
[APK] Google Now Launcher dia nohavaozina miaraka amin'ny maody fizahantany sy ny haben'ny kisary fampiharana mahazatra
Ao amin'ny Google Now Launcher izao dia azonao atao ny mampiasa maody modely mba hahafahan'ny mpampiasa manana tablette na phablet manararaotra ny efijery
Mitandrema amin'ny hafatra fampidinana krismasy emotika ao amin'ny WhatsApp, scam hafa io !!
Tandremo ny hafatra fampidinana krismasy ho an'ny WhatsApp, fisolokiana hafa fotsiny io
Skype sy Facebook Messenger dia navaozina miaraka amin'ny lohahevitra Krismasy
Skype sy Facebook Messenger dia mahazo vaovao farany miaraka amin'ny lohahevitra Krismasy sy ireo fiasa hafa hanasongadinana ireo daty ireo.
Vaovao farany SwiftKey izay manampy ny Pinying, fanatsarana fanoratana ary ny interface emoji nohavaozina
SwiftKey dia manatsara ny fanoratry ny mpampiasa ka diso be dia be no tsy vita amin'ny fomba vaovao ao amin'ity app ity.
Hahazo emote vaovao ny Nexus atsy ho atsy
Google dia nanambara fa ny fitaovana Nexus dia hahazo emojis vaovao na fantatra amin'ny anarana hoe emoticons tsy ho ela ao anatin'ny andro ho avy.
Snapchat dia mandefa ny Lens Store mba hamelabelarana ny sarinao $ 0,99
Snapchat dia nanangana ny Lens Store mba hahafahan'ireo mpampiasa fampiharana azy hitazona ireo lantira ireo raha mbola tadiavin'izy ireo
ANDROID ALERT !!. Tandremo ny hafatra hoe "Mahafinaritra tokoa ireo emotikon WhatsApp vaovao", fitaka izany
Tandremo ny hafatra Mahatalanjona ireo malware WhatsApp vaovao dia malware.
Sintomy ny sary masina Halloween tsara indrindra ho an'ny Android
Amin'ny fotoanan'ny fety Halloween mpanompo sampy dia asehonay anao ireo kisary Halloween tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android.
Ataovy personalize ny Samsung Galaxy misy lohahevitra 57 vaovao
Ataovy personalize ireo Samsung Galaxy anao amin'ireto lohahevitra vaovao 57 izay nampiana tao amin'ny magazin'i Samsung.
[APK] Sintomy izao ny kinova Nova Launcher vaovao miaraka amin'ny normalization icon
Nova Launcher dia mitondra antsika seho iray manatsara ny famolavolana ny vatasarihana fampiharana amin'ny alàlan'ny fanarahana ny haben'ny habeny sy ny fanovana azy hanarahana fitsipika iray.
Nova Launcher manavao ny famerenana ny habeny mba hifanaraka
Raha misy mampiavaka ny Android dia ny fanaingoana azy. Noho ny fahalalahana fa ny rafitra miasa misokatra ...
Icondy, fampiharana izay manampy anao amin'ny fampifangaroana sary masina avy amin'ny fonosana samihafa
Icondy dia mamela antsika hanambatra fonosana kisarisary amin'ny fomba mora hanamboarana ny telefaona finday Android.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny endrik'ilay Moto 360 tsikelikely
Androany dia asehoko anao tsikelikely sy amin'ny horonantsary Ahoana ny fomba ampanjifaina ny diarin'i Moto 360 amin'ny sarinay manokana sy amin'ny fombantsika sy ny fombantsika.
Google Play dia mety manana fizarana hanamboarana tranga smartphone
Google dia miasa amina fizarana ao amin'ny Google Play miaraka amin'ny fahafahan'ny mpampiasa manamboatra tranga ho an'ny fitaovany.
[APK] Tia tena ho an'ny Messenger na ny fomba famoronana emotikonanao manokana amin'ny endrikao
Selfied for Messenger dia ilay fampiharana Facebook vaovao ho an'ny Messenger izay miteraka fahatsapana satria mamela antsika hamorona ny fihetsem-pontsika manokana miaraka amin'ny endritsika manokana.
Dinosôzora saro-kenatra sy malahelo miloko eo amin'ireo emotikona miafina an'ny Google Hangouts
Androany izahay manome anao lahatsoratra iray izay ahafahanao manaitra ny namanao noho ireo emotikona miafina samihafa napetrak'i Google tao amin'ny Hangouts.
Icon Store, fivarotana famantarana ho an'ny Android
Androany dia manolotra magazay fivarotana na fivarotana ho an'ny Android izay tena ilaina amin'ny mpankafy fanovana na fitanana Android
Now Gesture Tweaks: fampiharana hanamboarana ny safidin'ny Google Now
Ao amin'ny Google Play no ahitantsika ireo rindranasa marobe izay mampanantena ny hanao ny finday ho anay bebe kokoa. Ankehitriny ny Gesture Tweaks dia mamela anao hanamboatra ny safo Google Now
Mety hisy ny fivoahan'ny kisary amin'ny fiantsoana feo an'ny WhatsApp sa ny sandoka hafa?
Ireto ve ireo sarin'ny fiantsoana feo WhatsApp na sandoka hafa?
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fanaraha-maso ny Android raha tsy miorim-paka
Ity misy fampiharana maimaim-poana izay hanampy antsika hanamboatra ny fibaikoana ny volan'ny Android nefa tsy mila miorim-paka
Dodol pop iray amin'ireo zavatra tena ankafizintsika rehetra indrindra rehefa mandefa smartphone vaovao isika dia ny fanaingoana azy amin'ny fomba feno, ampanjifaina azy araka izay tiantsika
New Version of Swiftkey miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana, lohahevitra vaovao sy tolotra
Ny kinova Swiftkey vaovao ankoatry ny fitondrana lohahevitra vaovao sy tolotra ao anatiny 33%, dia mitondra fanatsarana amin'ny fahombiazan'ny fampiharana ankapobeny
Ahoana ny fametrahana ny iOS 7 emojis amin'ny Android KitKat
Ny Emoticons dia anisan'ny resadresaka nifanaovanay nanomboka tamin'ilay mpitondra hafatra taloha sy tsy nisy.
Unicode 7.0 dia hitondra emoji vaovao 250 ao anatin'izany ny iray amin'ny rantsantanana afovoany
Emoji vaovao 250 no hiseho miaraka amin'ny kinova Unicode 7.0 vaovao, ao anatin'izany ny emoji afovoany malaza
CyanogendMod dia mandefa endritsoratra vaovao enina hanamboarana ny ROM anao ao amin'ny Play Store
CyanogendMod dia mandefa endritsoratra vaovao enina hanolorana fanaingoana bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa ny ROM
Azonao atao izao ny manamboatra ny antso an-tariby sy ny fampandrenesana ao amin'ny Hangouts
Miaraka amin'ny kinova vaovao dia azonao atao izao ny manamboatra ny feo am-peo sy ny fampandrenesana ao amin'ny Hangouts
Ahoana ny fanovana ireo kisary Android amin'ny SoftKeyZ Root
Tahaka ny itiavantsika manamboatra ny Windows misy ny menio Mac, olona maro no maniry ny fotoana hanamboarana ireo kisary fisidinana. Azo atao izany izao amin'ny fampiharana SoftKeyZ Root. Hita ao amin'ny Play Store amin'ny € 2 izy io. Ny hany lesoka ho an'ny sasany dia ny fiasany amin'ny Terminals fotsiny izay efa miorim-paka.
Ahoana ny fanovana habe ny sary masina Android amin'ny Giganticon
Ahoana ny fanovana habe ny sary masina miaraka amin'i Giganticon
Sintomy ny fonosana temika feno ho an'ny LG G2 maimaim-poana
Eto ianao dia manana rohy mivantana handefasana lohahevitra 16 ho an'ny LG G2 maimaim-poana amin'ny endrika APK ho fametrahana mora.
[APK] Identiconizer na ny fomba fanovana ny sarin'ny fifandraisanao amina sary masina
Androany aho te-hanolotra fampiharana maimaim-poana ho anao izay hanampy anay hanova ny sarin'ny fifandraisanao amin'ny Android ary hanome azy io mikasika azy io.
Tumblr ho an'ny Android izao dia mamela anao hanamboatra ny lohahevitry ny bilaoginao
Tumblr ho an'ny Android dia mahazo fanavaozana mahaliana hanovana ny lohahevitry ny bilaoginao araka izay tianao.
Mametraha emoticons premium vaovao maimaim-poana ao amin'ny WhatsApp anao
Androany aho te-hanolotra anao fampiharana maimaim-poana izay ahafahantsika manana emotikon premium maimaim-poana amin'ny WhatsApp anao.
Ny sary famantarana 7 tsara indrindra ao amin'ny Android
Betsaka ny fonosana kisary amin'ny Android, fa ireo fito ireo dia mety ho iray amin'ireo manome ny fampitaovana tadiavinao ny fitaovanao.
Fanohanana fonosana ikona ao amin'ny Themer Beta miaraka amin'ny kinova vaovao
Kitapo Icon ao amin'ny Themer noho ny fanavaozana farany ity fampiharana MyColorScreen ity izay manome endrika tsy mampino amin'ny telefaona Android anao.
Ahoana ny fomba hanaingoana manokana ny sary an-tsary na ny sary an-tsary miaraka amin'ny fikitika kanto
Angamba mpampiasa maro Android no tia ny fahaizana manamboatra ny OS. Androany dia mandroso lavitra kokoa isika amin'ny alàlan'ny fampiharana ahafahanao manaingo sary an-tsaina.
Fleksy fitendry dia nohavaozina amin'ny kinova 2.0 miaraka amina lohahevitra vaovao, fanaingoana an'i Cloud sy maro hafa
Ny kitendry Fleksy dia mety ho ny safidy tadiavinao raha tsy maharesy lahatra anao ny fitendry anao.
Raha te hanana fandaminana kely kokoa ny fitaovanao ianao, dia tsy azonao hadinoina ny lesona momba ny Newbie androany momba ny fanaingoana sy fandaminana Android.
Kitapo Icon 3 hanamboarana ny smartphone Android
Mandehandeha amin'ny Google Play izahay mikaroka rijan-kevitra hahatonga anao ho finday avo lenta kokoa ho anao ary mitondra kisary 3 fonosana izahay hanamboaranao ny smartphone Android anao.
Samsung dia manantena ny mety hisian'ny Galaxy S5 miaraka amin'ireo sary masina vaovao an'ny TouchWiz
Ireo sary famantarana TouchWiz vaovao dia mampiseho ny teboka manan-danja izay hifantohana ny Samsung Galaxy S5 vaovao izay hatolotra.
SwiftKey dia mandray kinova beta vaovao miaraka amin'i Emoji ary safidy hanampiana laharana ambony isa
Ireo tovolahy ao ambadiky ny fampandrosoana ny SwiftKey dia manao asa goavana isam-bolana mamadika ny klavier malaza ho fampiharana tsara.
Ny antony mahatonga ireo kisary banga ao amin'ny bara fampandrenesana ao amin'ny Android 4.4
Ireo kisary banga ao amin'ny Android 4.4 dia misy antony roa manosika azy ireo hiova loko amin'ny kinova taloha.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny Android amin'ny farany ambony amin'ny Xposed Framework
Ataovy araka ny itiavanao azy amin'ny Xposed Framework ny Android-nao fa tsy mila mandrehitra rakitra akory. Asio fampiasa CM na AOKP ao amin'ny ROM STOCK.
Inona no atao hoe ROM sy Root?
Ny ROM manokana dia natao ho an'ny sokajin'olona manokana manana fahalalana sy fitaovana hametrahana azy ireo, saingy tsikelikely ...
KitKat 4.4 misintona maimaim-poana
Tamin'ny faran'ny herinandro, navoaka ny sarin'ny interface Android KitKat 4.4, toa ilay hitanao ...
Kitapo kisary maimaim-poana hanamboarana ny Android
Kitapo kisary maimaim-poana hanamboarana ny terminal Android amin'ny fombanao manokana
Androany izahay manome Mod anao hametrahana ny statusbar sy ny menio fanovana AOSP ao amin'ny Sony Xperia U. Amin'izany dia afaka manome endrika vaovao ho an'ny finday izahay
Androany izahay manome anao Mod Pack ho an'ny Sony Xperia P hanome azy ny fisehoan'ny Sony Xperia Z miaraka amin'ireo fampiharana sy fiasa izay entiny. Midira ary manandrama.
Cyber-shot Mod ho an'ny Xperia 2012
Fampianarana hametrahana ny Cyber-shot Mod ho an'ny fakantsary Xperia an'ny 2012. Ity Mod ity dia mitondra fanitarana vaovao ho an'ny fakan-tsary toy ny maody HDR amin'ny sary.
Rom ICS F4k MOD v4.0.4 r4 IMM76I miaraka amin'i Linaro ho an'ny Samsung Galaxy S
F4K dia manolotra antsika ny rom voalohany ho an'ny Samsung Galaxy S miaraka amin'ny fanatsarana ny kaody Linaro.
HeLauncher, fomba vaovao hanokanana ny findainao Android
HeLauncher dia rindranasa izay misy interface 10 samihafa mba hahafahanao manamboatra ny efijery an-trano an'ny findainao Android.